Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Sint Maarten » Misokatra any Etazonia indray i St. Maarten amin'ny 1 Aogositra miaraka amin'ny protokolota henjana
Hisokatra amin'ny 1 Aogositra 2020, i St. Maarten, ho an'ireo mpandeha avy any Etazonia. Ny fiarovana ny mpitsidika sy ny mponina no laharam-pahamehan'ny firenena. Ho fanomanana ny fisokafana dia nisy ny fizahana ny tranokala tany amin'ny trano fandraisam-bahiny rehetra mba hahazoana antoka fa harahina ny fombafomba sy ny torolàlana. Miaraka amin'ireo fepetra henjana ireo, dia manohy ny fanokafana an-dàlana azy i St. Maarten.
Ao anatin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny, fepetra enina lehibe no novolavolaina mba hisorohana ny fiparitahan'ny Covid-19 ao amin'ny nosy misy ny fisintahana ara-batana miaraka amin'ny marika amin'ny gorodona, ny fampiasana maska ​​tsy maintsy atao, ny halaviran'ny fiaraha-monina 2 metatra, ny fomba fanadiovana tena, ny fomba mety amin'ny fanadiovana ny faritra, ny trano ao an-trano rehefa misy ny aretina hafatra.
Misy ny fepetra henjana amin'ny fitsangatsanganana any amin'ny nosy araka ny voalazan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, ny fampandrosoana sosialy ary ny asa. Ny mpitsidika dia takiana amin'ny famitana fanambarana ara-pahasalamana an-tserasera 72 ora alohan'ny fahatongavan'ny www.stmaartenentry.com. Ny mpitsidika dia takiana amin'ny dia miaraka amin'ny kopian'ny fanambarana ara-pahasalamany. Ny mpandeha rehetra dia takiana amin'ny famitana ny fitsapana COVID-19 (PCR). Ny mpitsangatsangana dia tsy maintsy mandray ny fitsapana sy ny valiny ao anatin'ny 72 ora alohan'ny datin'ny dia. Tsy misy fitsapana hafa eken'ny tompon'andraikitra ao St. Maarten. Ireo mpitsidika izay tsy mahavita manome fitsapana COVID-19 dia hosedraina sy hasaina karamaina mandritra ny 14 andro amin'ny volany manokana.
Ny mpitsidika rehetra dia tsy maintsy mandeha miaraka amin'ny sarontava, mpanadio tanana ary mitafy saron-tava mandritra ny sidina sy ny seranam-piaramanidina. Notoroana hevitra ireo mpitsidika mba hividy fiantohana amin'ny loza mety hitranga rehetra, hahazoana antoka fa voasarona izy ireo raha sendra marary rehefa vakansy. Hatramin'ny 1 Aogositra, ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Princess Juliana dia hanantena ireto sidina manaraka ireto: hanohy ny sidina isan'andro ny American Airlines avy any Miami ary in-dimy isan-kerinandro avy any Charlotte afa-tsy ny talata sy alarobia. Aorian'ny 20 Aogositra dia hanidina isan-kerinandro avy any Charlotte izy ireo. Ny Delta Airlines dia hiasa intelo isan-kerinandro avy any Atlanta amin'ny Alakamisy, Sabotsy ary Alahady. Jet Blue dia hisidina indray mandeha isan-kerinandro avy amin'ny seranam-piaramanidina JFK, ary ny Spirit Airlines dia hisidina indray mandeha isan-kerinandro avy any Fort Lauderdale.
Nanomboka tamin'ny 15 Jona dia niverina nankany St. Maarten ny sidina iraisam-pirenena taorian'ny nanakatonana ny sidina ara-barotra nandritra ny telo volana. Ny fiaramanidina tsy miankina, Karaiba ary eoropeanina mpitatitra entana toy ny Air France sy KLM dia nidina tany amin'ny seranam-piaramanidina indray. Ity fomba fanokafana miverimberina ity dia nahomby hatreto.
Miarahaba ireo mpitsidika any Karaiba i Saint Lucia amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra "Bubblecation"